Izinto ezi-6 eziya kuthi zimisele ukuvela kwemarike yemasheya kwisiqingatha sesibini sonyaka | Ezezimali
Alithandabuzeki elokuba icandelo lesibini lonyaka liya kuba nzima kakhulu ukujongana neemarike zezabelo. Apho kukho izinto ezininzi ezinokuphelisa ibhalansi kwicala elinye okanye kwelinye. Nangona amathemba kwezi zinto zichanekile ayithandeki kwimidla yakho. Kuba isenemibuzo emininzi ekufuneka isonjululwe ukusukela ngoku. Kukuphi olona tshaba luphambili kwimidla yabasebenzisi bemakethi yesitokhwe
Ukusuka kule meko ngokubanzi, siza kubhengeza ezinye zezona zinto zibalulekileyo nesinokuthi sisebenzise kuzo ukuyila nasiphi na isicwangciso sotyalo-mali. Nokuba kukuvula isikhundla kwiimarike ze-equity okanye kwi hlala ematyaleni kwiakhawunti yokonga. Ke ngale ndlela, sikwimeko ezifanelekileyo ukwenza ukonga kunenzuzo ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ukusuka kwindawo yokujonga zonke iiprofayili zabatyali mali abancinci nabaphakathi: olondolozayo, ophakathi kunye nolaka.
Kwelinye icala, asinakulibala ukusukela ngoku ukuba ezi zinto kwiimarike zezabelo zinokuthatha isigqibo ekukhetheni ezona stock zilungileyo kwimarike yemasheya. Nokuba sinethemba elingcono jonga ukubuya okubanzi zethuba eliphakathi nelide. Ukusuka kunyango olwahlukeneyo kwizicwangciso eziza kusetyenziswa. Ezinye zezi zinto zezi sizokukuveza apha ngezantsi.
1 Izinto: imfazwe yorhwebo
2 Indaleko kaBrexit
3 Ukucotha kuqoqosho
4 Ukulungiswa kwexabiso
5 Intlekele kwi-European Union
6 Ukuxabana ne-Iran
Izinto: imfazwe yorhwebo
Iziphumo zemfazwe yorhwebo phakathi I-United States ne China Iya kuba yenye yezona zinto zichaphazelekayo kule nxalenye yesibini yalo nyaka. Ukuya kuthi ichaphazele imeko yeemarike zezabelo. Ngengqiqo ethile okanye enye kwaye inokusetyenziswa ukuze ukwazi ukusebenzisa inkqubo yokusebenza kwiimarike zezemali. Kuba iya kuba lixesha lokuthatha indawo yobudlelwane bethu nelizwe elihlala linzima lemali. Isenokuba ziinyanga ezimbalwa phambi kokuba abatyali mali babone isiphumo kule mfazwe yorhwebo phakathi kwezi zigebenga zimbini zoqoqosho lwehlabathi.
Amathemba okwangoku awathembisi konke konke kuba isigqibo sikaMongameli wase-United States asizukunceda kangako nyanzelisa ukuba nethemba phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngengqondo yokunyusa amaxabiso erhafu kwimveliso zorhwebo ezivela e China. Ngobungozi obungaphezulu kokucacileyo bokubonakala kokwehla koqoqosho lwamazwe aphesheya kwaye oko kungakhokelela kwintengiso yesitokhwe yesiqingatha sehlabathi ukuba sityelele ezantsi enyakeni kwixabiso lesitokhwe.
Ukuphuma kwe-Great Britain kwi-European Union kuya kuqhubeka nokudlala kakhulu kule minyaka izayo. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba inokuthi ibe nefuthe layo kwiimarike zokulingana zommandla we-euro. Nangona mhlawumbi kungenjalo ngamandla de kube ngoku. Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko sexabiso lemarike yemasheya. Ayothusi into yokuba iBrexit lelinye lawona manqaku aphikisanayo Umgaqo-nkqubo wezoqoqosho waseYurophu. Ngaphandle kokwazi ngokuqinisekileyo ukuba kuya kwenzeka ntoni ukusukela ngoku.
Ngelixa kwelinye, kukho imbonakalo enokubakho kwezopolitiko zase-Bhritane ngamanye amaxesha anzima kakhulu kwiimarike zezabelo. Phi zinokwenza izinto zibe mbi ngakumbi kuxhomekeke kwindaleko kule nkqubo inzima ngokwenene yazo zonke iiarhente zezemali. Akuyi kubakho sigqibo ngaphandle kokulinda iinyanga ezimbalwa ukuze ubone eyona mpembelelo iya kuba nayo kwiimarike ze-equity. Akumangalisi ukuba yinto enokukunceda ukuba ufezekise inzuzo engcono kwimisebenzi oyenzayo kwezi nyanga.
Ewe ukubuyela umva kuqoqosho lwamanye amazwe akunakubonwa. Emva kohlaziyo lwamva nje lwezinto ezahlukeneyo zezemali. Kwaye oko kungakhokelela kwixesha elitsha lokwehla kwamandla emali elifihliweyo kwinxalenye elungileyo yeendawo zoqoqosho kwihlabathi liphela. Kuya kufuneka siqwalasele kakhulu ukusukela ngoku ukuya phambili ukuze sazi ukuba yeyiphi eyona nto sinokuyenza kwiimarike zezabelo. Ukuze ndi yenza isigqibo esifanelekileyo kwezi nyanga sinazo de kuphele lo nyaka sikuwo. Kwaye oko kunamathuba amaninzi okuphela ngengqondo engalunganga.
Kwelinye icala, le nto inokuba sisisusa se yehla kwiingxowa phantse zonke. Ukuhamba ukusuka kwi-bullish ukuya kwi-bearish ngexesha elifutshane kakhulu, njengoko kubonisiwe ngabanye babahlalutyi abafanelekileyo kwiimarike ze-equity. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha kwindalo kuzo zonke iintlobo zendlela kwizicwangciso zotyalo-mali. Isenokuba sisigqibo esigqibeleleyo kunokuba uninzi lwabatyali zimali abancinci nabaphakathi banokucinga.
Alithandabuzeki elokuba amaxabiso ezabelo aphakame kakhulu kwiminyaka edlulileyo kwaye le nxalenye yonyaka inokusebenzela ukulungisa amaxabiso ezabelo ezikhuselweyo ezidwelisiweyo. Nangona ihlala isaziwa iphantsi ngantoni Le nkqubo iyakwenziwa kwisicatshulwa. Ngayiphi na imeko, isenokuba lelona xesha lilungileyo lokuhlengahlengisa izikhundla kwiimarike zezabelo. Ukukhetha ukuhlawula amatyala kwimali eseleyo yeakhawunti yokonga yabasebenzisi besitokhwe.
Ngelixa ngokuchaseneyo, eli xesha linokusebenza njengesiseko sokufikelela kumaxabiso asezantsi kulo nyaka. Ukuze ngale ndlela, ixabiso lezabelo lithengwe kumanqanaba okhuphiswano ngakumbi kunangoku. Kwinto enokuthi ithathelwe ingqalelo njengethuba leshishini esinalo kwiimarike zezabelo. Ukufikelela kwinqanaba lokuxabisa ngaphezulu kakhulu kunakwiminyaka embalwa edlulileyo. Kwiinyanga ezimbalwa ngokuqinisekileyo oko kuya kuba nzima kakhulu ngenxa yokuhla kwexabiso lamaxabiso.
Intlekele kwi-European Union
Enye into engafanele ilibaleke yile inento yokwenza nolawulo kule ndawo yezopolitiko neyoqoqosho. Ngokukodwa emva kweziphumo zonyulo lokugqibela lwaseYurophu. Ngenxa yokungazinzi okubonakalayo kwaye oko kungakhokelela ekunciphiseni kwexabiso kwiimarike ze-equity. Apho ayinakugwetywa ngaphandle ekubeni yinto ethatha isigqibo ngakumbi kunoko abatyali zimali abancinci nabaphakathi banokucinga. Ayothusi into yokuba inokuvelisa into enkulu ukuguquguquka kwamaxabiso esitokhwe nangaphaya kokunye ukujongwa kobugcisa kunye nokusisiseko koko.
Ikwafaneleke kakhulu kukuba amazwe angamalungu e-European Union ayangena kwinkqubo yokukhula okuncinci kweYurophu. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo kunokuvelisa ii-indices zakho zesitokhwe Ukufumana izilungiso kumaxabiso abo kwisiqingatha sesibini sonyaka. Ukuze ngale ndlela, isicwangciso esiliqili ngakumbi siyilelwe ngenjongo yokugcina ukonga ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselwayo. Kwaye kunokuba luncedo ngamanye amaxesha kule semester yesibini yonyaka.
Ewe kunjalo, enye yeemeko ezinokuthi zisuse imarike yokulingana inxulumene nembambano phakathi kweUnited States neIran. Ngokukodwa ngenxa yefuthe elinokuba nalo kwi Ixabiso leoyile ekrwada. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba inokuthi ivele kubudlelwane bamanye amazwe obunokuthi buchaphazele ukwenziwa kwamaxabiso kwezinye iiasethi zemali ezifanelekileyo ezifanelekileyo. Ngelixa kwelinye icala, le nyani inokukhawulezisa ukuhla kwezoqoqosho kwezinye iindawo zejografi. Ngamafutshane, lumka kakhulu ngalo msitho we-geostrategic.
Okokugqibela, qaphela ukuba kuya kuhlala kunenye izinto ezingaphezulu kwesekondari ezinokubaluleka ngakumbi kunokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi bekholelwa ekuqaleni. Ngezinto ezisukela kwezona zoqoqosho ukuya kwiindlela zentlalo. Ngaphandle kokulibala eminye imiba enokuvela ngaxa lithile kule semester yesibini yonyaka. Le yinto elindelwe yinxalenye enkulu yabatyali mali abancinci naphakathi, xa beqaphela ukuba eli xesha lonyaka alizukunceda kakhulu kwiimarike zezabelo.
Iya kubaluleka kakhulu, ngokubhekisele kwimarike yaseSpain, bonke abatyali mali baya kuyazi into enokwenzeka kumhlaba waseCatalan. Ngefuthe elicacileyo kwixabiso lezabelo ezinokuba novakalelo kakhulu kuyo yonke into enokwenzeka kwesi siqendu kumhlaba wesizwe. Nangona siphantsi kwempembelelo yezinto zangaphambili esele sizikhankanyile kweli nqaku. Ukusetyenziselwa ukusebenza kwabatyali mali abancinci nabaphakathi kwimarike yemasheya, ethi yona emva kwazo zonke ibe yenye yeenjongo zabo eziphambili kulo naluphi na uhlobo lwesicwangciso sotyalo mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izinto ezi-6 eziya kuthi zimisele ukuvela kwemarike yemasheya kwisiqingatha sesibini sonyaka
Ibex 35 inokuwisa amanqaku angama-9.000